R & D Capacity - OUZHAN TRADE (Shanghai) CO., LTD
Ukuba ufuna sivelise imveliso oyifunayo, ngesiqhelo, kufuneka usinike imizobo ye-3D okanye imizobo ye-2D yeemveliso zakho. Kodwa ukuba awunayo imizobo yazo, kufuneka usithumelele isampulu okanye wabelane ngeengcinga zakho nathi, sinokwenza imephu kwimizobo ngokwesampulu okanye kwiingcinga zakho.
Iparamitha ezizenzekelayo zokulinganisa
Iiparamitha zokulinganisa ezizenzekelayo (ukuba ungasinika isampulu): I-Ouzhan inezixhobo zokulinganisa ezizenzekelayo ezivela eJapan, ezinokulinganisa ngokuchanekileyo ubungakanani beemveliso, emva koko zenze ngokuzenzekelayo imizobo ye-3D.
Modelling 3D: Iinjineli zika-Ouzhan nazo zinokwakha iimodeli ze-3D zeemveliso ezisekwe kwizimvo zabathengi.
Ubhaqo wokwenza into: Imizobo yoyilo yokuqala ifuna ukuphononongwa ngesandla, iqinisekiswe kwaye isayinwe ziinjineli ezintathu ubuncinci.
Ukwenza isampuli: Siza kwenza iisampulu ngokwemizobo eqinisekisiweyo.
Ample Isampula isiqinisekiso: Siya kuthumela isampuli kumthengi ukuze aqinisekiswe, emva koko umthengi kufuneka asayine isiqinisekiso sesampulu.
Production imveliso Mass: Emva kokuba sifumene isiqinisekiso sesampulu esisayinwe ngumthengi kunye nokuhlawula kwangaphambili, siya kwenza imveliso yobunzima.
Silupasile uvavanyo lwe-ISO 9001: 2015, kwaye sinenkqubo yolawulo esemgangathweni yesandi. Ke awunakhathazeka malunga nomgangatho weemveliso zethu, siya kuzama ukukunika ezona mveliso kunye neenkonzo ezisemgangathweni.
Idlulile ngokusebenzisa isatifikethi sokufaneleka sikazwelonke kwaye yamkelwe kakuhle kushishino lwethu oluphambili. Iqela lethu lobuchule lobunjineli liya kuhlala likulungele ukukusebenzela ukubonisana kunye nengxelo. Sikwazile ukukunikezela ngeesampulu zasimahla zokuhlangabezana neemfuno zakho. Imizamo efanelekileyo iya kuthi iveliswe ukukunikezela ngeyona nkonzo iluncedo kunye nezisombululo. Ukuba unomdla kwinkampani yethu kunye nezisombululo, nceda unxibelelane nathi ngokusithumela ii-imeyile okanye usitsalele umnxeba kwangoko. Ukuze ukwazi ukwazi izisombululo zethu kunye neshishini. Kwaye uya kuba nakho ukuza kumzi-mveliso wethu ukuze uyibone. Siya kuhlala sizamkela iindwendwe ezivela kwihlabathi liphela kwifemi yethu.